फेसबुकमा लाइभ आत्महत्याको दृश्यको साक्षी बन्नुपर्दा, रोक्न सकिन्थ्यो तर.. – MySansar
फेसबुकमा लाइभ आत्महत्याको दृश्यको साक्षी बन्नुपर्दा, रोक्न सकिन्थ्यो तर..
आइतबार राति साढे नौ बजे चितवन कालिका नगरपालिका घर भएका २६ वर्षीय निश्चल तामाङले आफूले आत्महत्या गर्न लागेको संकेत फेसबुकमा दिइसकेका थिए। झण्डै तीन घण्टासम्म उनी पटक पटक फेसबुक लाइभमा आइरहेका थिए। गएराति अबेर फेसबुकका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुमाझ यसको निकै चर्चा भएको थियो। उनलाई बचाउन धेरैले प्रयास गरेका थिए। एक लाखभन्दा बढी सदस्य भएको एमआरआर ग्रुपमा उनका बुबाको फोन नम्बरसमेत दिई यसमा फोन गर्नुस् भनिएको थियो। प्रहरीलाई फोन गर्न, फेसबुकमा रिपोर्ट गर्न पनि धेरैले सुझाएका थिए। तर उनलाई बचाउन सकिएन। मैले राति निकै ढिला यो बारे थाहा पाउँदा कतिले उनको मृत्यु भइसकेको भनिरहेका थिए भने कसैले ठट्टा गरेको होला, नत्र लाइभमा झुण्डिँदा झुण्डिँदै कसरी भिडियो आफै अफ भयो भनेर शंका गरिरहेका थिए। लाइभ भिडियोको रेकर्ड उनको प्रोफाइलमा रहेछ, हेरेँ। गएर पासो लगाएर झुण्डिएको एकछिनपछि भिडियो अफ भएको रहेछ। कुरो थाहा पाउन सकिएन। साथी सविन ढकाललाई यसले फेसबुकमा आत्महत्या गरेको भनेर चर्चा भइरहेको रहेछ, बिहान उठेपछि बुझौँ है भनेर फेसबुक मेसेन्जरमा पठाउँदा बिहानको ३ बजिसकेको रहेछ।
अबेला भइसकेकोले सुतेँ। दिउँसो पहिलोपोस्ट कार्यालय पुगेर सविनलाई यसबारे केही बुझ्यौ भनेर सोध्दा ‘हावा जस्तो लाग्यो’ भने। खासमा उनको फेसबुक प्रोफाइलबाट झुण्डिएको लाइभ भिडियो हटाइसकिएको रहेछ। बाँकी भिडियोहरुमा रक्सी र चुरोट खाँदै लाइभमा बोलिरहेका देखिन्थे। लागेको सुरमा यत्तिकै मर्छु भनेको हुनसक्ने सविनको तर्क उचित थियो। मलाई चाहिँ त्यो झुण्डिएको भिडियो हेरको भएर घटना साँचो हो कि जस्तो लागेको थियो।
तर कसरी खोज्ने? कुनै क्लु थिएन। हिजो ग्रुपहरुमा देखिएको फोन नम्बर पनि कता हो कता, सेभ गरिएन। कुन ठाउँमा हो समेत थाहा थिएन। निश्चलको फेसबुकमा लिभ्स इन काठमाडौँ लेखिएको थियो। हिजो फेसबुकमै कसैकसैले चितवन भनेको जस्तो पनि लागेको थियो।
खोज्न थाल्यौँ। फेसबुकमै भेटिएका नम्बरहरुमा फोन गर्दै गएपछि सविनले एउटामा उनकै बाबु जीवन तामाङलाई भेट्टाए। उनले घटनाबारे विस्तृत बताए। हिजो फोन गएको रहेछ नि बुवा जीवनलाई पनि धेरै पटक। सविनसित कुरा गर्दा उनले आफू निद्रामा भएकोले मोबाइलमा धेरै कल आएको थाहै नभएको बताए। करिब १ बजेतिर छोराको साथीले गरेको फोनको घण्टीले बल्ल निद्रा खुलेछ। ‘छोराको कोठामा गएर हेर्नु त अंकल’ भनेर छोराको साथी कराएछ। कोठामा गएर हेर्दा त झुन्डिएको अवस्थामा देखेछन् छोरालाई।
कसैले झुक्याउनलाई यत्तिकै भिडियो राखेको र फोनमा पनि बाबु बनेर बनावटी कुरा गरेको त हैन? पत्रकारितामा शंका गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रहरीबाट कन्फर्म गर्न खोजियो। संयोगले घटनास्थल पुगेका त्यस क्षेत्रका सई शम्भु चौधरीसित सविनको पुरानै चिनजान रहेछ। प्रहरीले पनि पुष्टि गरिसकेपछि घटना सही भएको यकिन भयो।
यत्तिकै समाचारमात्र बनाएर राख्दा फिक्का हुने भएकोले आत्महत्याको संकेत देखाउनेहरुलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर अर्का साथी सागर बुढाथोकीलाई एक जना मनोचिकित्सकसँग कुरा गर्न लगाएँ। उसले मनोचिकित्सक गोपाल ढकालसित कुरा गर्‍यो। त्यसपछि पहिलोपोस्टमा यस्तो समाचार बन्यो- फेसबुकमा लाइभ देखाउँदै चितवनका २६ वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या
भिडियो र परिचय देखिने स्क्रिनसट भने राखेनौँ। भरे फेरि युट्युबमा सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर ट्रेन्डिङ भिडियो बनाएर हाल्लान् भन्ने डरले। के थाहा कसैले भिडियो सेभ गरेर पो राखेको छ कि, अनि युट्युबबाट आउने डलरको लोभमा त्यो पीडादायी दृश्य सनसनीपूर्ण बनाएर युट्युबमा हाल्ने पो हुन् कि। त्यसो नहोस् भन्ने कामना गरौँ।
पहिलोपोस्टमा समाचार आएको केही घण्टापछि केही अनलाइनले कपिपेस्ट गरे, केहीले आफ्नै हिसाबले समाचार बनाए।
मलाई भने डर लागिरहेको छ, यसकै सिको गरेर फेरि अरु कसैले यस्तै खालको आत्महत्या गर्ने त हैनन्? त्यसो हो भने हामी सतर्क हुनु जरुरी छ। एउटा ज्यान गुम्यो, अरु नगुमोस् भन्नेमा सबैले ध्यान दिउँ।
फेसबुकले आफ्नो प्लेटफर्ममार्फत् यस्तो दुरुपयोग बढेपछि गत वर्ष आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट आत्महत्याको प्रवृत्ति उसका फेसबुक साथीहरुभन्दा छिटो थाहा पाएर रिपोर्ट गर्ने टुलको प्रयोग युरोपबाहेक विश्वभर सुरु गरिएको बताएको थियो। हिजो पक्कै पनि रिपोर्ट म लगायत धेरैले गरेको हुनुपर्छ। तर फेसबुकले के गर्‍यो यो थाहा भएन।
दुई वर्षअघि झापाको एउटा घटनामा भने फेसबुकले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। त्यतिबेला २० वर्षीय युवकले फेसबुकमा सुसाइड नोट लेखेको रहेछ। प्रहरीले उसको ठाउँ पत्ता लगाएर मध्यरातमा फोन गरेर त्यही युवकसँग कुरा गरेको थियो र आत्महत्या नगर्न मनाएको त्यतिबेलाको काठमान्डु पोस्टमा समाचार छापिएको छ।
यस पटक पनि फेसबुकले प्रहरीलाई खबर पठाएर पनि प्रहरीले सतर्कता नजनाएको हो कि फेसबुकले थाहै नपाएको हो त्यो थाहा हुन सकेन। कसैले प्रहरीलाई फोन गरेर जानकारी दिएको भए पनि तीन घण्टाको बीचमा घटना रोक्न सकिन्थ्यो कि। केहीले कमेन्टबाटै प्रयास गरे। तर केहीले लाइभ हुँदाहुँदै कमेन्टमा कहिले गर्ने दाइ, राति अबेला गर्ने भए सुत्नु पर्‍यो भनेर जिस्कने, उक्साउने, गाली गर्ने गरेको पनि देखियो।
नेपाल धेरै आत्महत्या हुने देशमा पर्छ। तथ्याङ्कहरु निकै डरलाग्दा छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिनमा २५ जनासम्मले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। आत्महत्या निकै ठूलो समस्या भए पनि यसलाई समस्या जस्तो लिइएको छैन। समाधानका उपाय पनि खोजिँदैन।
फेसबुकमा लाइभ देखाएर त नेपालमा पहिलो पटक यस्तो भएको हो तर स्टायटस लेखेर आत्महत्या धेरैले गरिसके। यसरी कसैले सोसल मिडियामा आत्महत्याको संकेत दिएमा कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारे क्लिनिकल मनोविज्ञ डा. विजय ज्ञवालीले तीन वर्षअघि यस्तो सुझाएका थिए। कृपया यसलाई मनन् गरेर आगामी दिनमा यस्तो घटना हुनबाट जोगाऔँ।
सर्वप्रथम यस्ता स्टाटस देखेर शंका लागेमा उनीहरुसित तुरुन्त सम्पर्क स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? भनेर कुरा गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। एकान्त कोठामा भएको साथीलाई खुला हावामा निस्कन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ।